-Dhacdo Shiinuhu Cadaadis Yar 500psi Xakamaynta Cadaadiska Sare ee Sare ee gaaska soo saaraha iyo alaab-qeybiyaha |Wofly
Cadaadis Hoose 500psi Xakamaynta Cadaadiska Sare ee gaaska
WL400 waxay ku habboon tahay dhuumaha labaad, oo ku habboon xakamaynta socodka gaaska.Max.Cadaadiska gudaha 20.7Mpa (300PSI), iska caabbinta iska caabinta, tijaabada aqoon isweydaarsiga nadiifka ah, waxay ku habboon tahay Shaybaadhka, anysis gaas iwm gaas nadiif ah oo sarreeya.
WL400 Cadaadis Dhimista
1 Qalabaysan R11 cadaadiska xakamaynta iyo waalka kubbadda cadaadiska sare.
2 Tuubo dhex mari tijaabada cadaadiska iyo tijaabada daadinta.
3 Rakibaadda gidaarka, fududahay in la isticmaalo oo badbaado leh.
4 2 ″ cabirka cadaadiska birta, si cad u akhri
2 Cadaadiska dibadda 0 ~ 25, 0 ~ 50, 0 ~ 50,0 ~ 250,0 ~ 500psig
3 Heerkulka shaqada -40°F ilaa 165°F / -40°c ilaa 74°c
4 Heerka Fasaxa ee ka dhanka ah Hawada 2 * 10-8atm cc/sek
5 Qiimaha CV 0.14
Isku xirka dibadda
1: 6mm barb ku habboon
1: 1/4" alxanka
2: 3/8" alxanka
C: nickel plated naxaas ah
3: 8mm barb ku habboon
5: 10mm barb ku habboon
Q1.Maxaa alaab ah oo aad bixin kartaa?
Re: Xakamaynta cadaadiska sare, hagaha gaasta dhululubada, waalka kubbadda, waalka irbadda, qalabka isku xidhka (isku xidhka).
Q2.Miyaad samayn kartaa alaabta ku salaysan codsiyadayada, sida isku xirka, dunta, cadaadiska iyo wixii la mid ah?
Re: Haa, Waxaan khibrad u leenahay kooxda farsamada waxaanan naqshadeyn karnaa oo soo saari karnaa alaabta sida waafaqsan shuruudahaaga.Qaado xakamaynta cadaadiska tusaale ahaan, waxaanu dejin karnaa cabbirka cabbirka cadaadiska iyadoo loo eegayo cadaadiska shaqada ee dhabta ah, haddii maamuluhu uu ku xiran yahay dhululubada gaaska, waxaan ku dari karnaa adabtarada sida CGA320 ama CGA580 si loogu xiro nidaamiyaha oo leh valve cylinder.
Q3.Ka waran tayada iyo qiimaha?
Re: Tayada aad bay u wanaagsan tahay.Qiimuhu maaha mid hooseeya laakiin waa mid macquul ah heerkan tayada.
Q4.Ma bixin kartaa muunado si aad u tijaabiso?bilaash?
Re: Dabcan, waxaad qaadan kartaa dhowr si aad u tijaabiso marka hore.Dhinacaaga ayaa qaadi doona qiimaha qiimaha sare ee uu leeyahay awgeed.
Q5.Ma ku shaqayn kartaa dalabaadka OEM?
Re: Haa, OEM waa la taageeraa inkasta oo aan sidoo kale haysanno sumad noo gaar ah oo lagu magacaabo AFK.
Q6.Waa maxay hababka lacag-bixinta ee la doortay?
Re: Dalabka yar, 100% Paypal, Western Union iyo T/T ka hor.Iibka guud, 30% T/T, Western Union, L/C sidii deebaaji, iyo 70% baaqi la bixiyay ka hor inta aan la dhoofin.
Q7.Ka warran wakhtiga hogaanka?
Re: Sida caadiga ah, wakhtiga keenista waa 5-7 maalmood oo shaqo muunad, 10-15 maalmood oo shaqo ee wax soo saarka guud.
Q8.Sideed u rari doontaa alaabta?
Re: Qadar yar, caalamiga ah ayaa loo isticmaalaa inta badan sida DHL, FedEx, UPS, TNT.Qadar badan, hawo ama badda.Ka sokow, waxa kale oo aad heli kartaa gudbiyahaaga oo soo qaada alaabta oo habeeya shixnadda.
Hore: Cadaadis sare 3000 psi Beddelka Manifold Gas Co2 Hydrogen
Xiga: Buugga Gaaska Warshadaha ee Shaybaadhka Gaaska ee Labada Silinder
Cadaadis Sare 3000 psi Gas badan oo wareejin ah ...